pawan neupane's Page - MeroReport
pawan neupane's Apps
pawan neupane's Likes
Pawan neupane's Friends
pawan neupane's Discussions
धन्न सभाषद भईएनछ यार
Started this discussion. Last reply by एसवी गौतम May 17, 2011.2Replies4Likes
धन्न सभाषद भईएनछ यार । बिचरा यी सभाषदहरुलाई त अब त बाटै हिँडन गारो भए जस्तो देखिन थाल्यो । एउटा राम्रै चिनजान भएको गाऊँले सभाषदलाई सन्चोबिसन्चो सोध्न फोन गरेको ४ दिन जति भयो,उठाउँदैन त यार । संबिधान…बाँकी
तपाईंको विचारमा पुरुषत्व के हो ?
Tags: हो, ?, के, पुरुषत्व, विचारमा
नेपाल भरिका संचारकर्मीका लागि संबैधानिक सबाल बिषयक तालिमको अवसर । बिषयवस्तु र आवश्यकताका लागि यो लिंकमा जानुहोला । http://equalaccess.org.np/need-assessment-survey
यहि मार्च २०११ देखि डिजिटल ब्रोडकाष्ट इनिसिएटिभ, इक्वल एक्सेस नेपालले पत्रकार तथा संचारकर्मीहरुका लागि संबिधानसभा र संबिधानका अन्तर्वस्तुसम्बन्धी सम्बाद तथा बहशलाई संचारमाध्यमहरुबाट प्रबर्द्धन…बाँकी
pawan neupane has not received any gifts yet
pawan neupane's Page
A Devlopment Communicator
pawan neupane's Photos
pawan neupane's Videos
Community Reporter's Video 'Radio for Social Change'
Added by pawan neupane0Comments0Likes
Added by pawan neupane0Comments 1 Like
Peedama Patrakarita- Journalism in Pain
Pawan neupane's Blog
पानी चाहिए झम्सीखेल चोक आउनुहोस् !
Posted on May 1, 2013 at 1:30pm0Comments0Likes
गर्मी मौसम चढेसंगै पानीको ब्याकुलताले सवैलाई सताउने गर्छ । अँझ काठमाण्डौं उपत्यकाको पानीको कुरा गर्ने हो भने त धेरैका धेरै खालका कथाब्यथा होलान् ।
धारामा महिना दिनदेखी पानी नआएको पीडाका भोगाईहरु धेरैले वाँडन सक्नुहोला । तर यही पीडाविच अर्को एउटा खवर, ललितपुर पुल्चोकबाट पश्चिम झम्खीखेल चोक छ । त्यो…
Posted on April 12, 2013 at 4:30pm 1 Comment3Likes
नदेखिएको पाटोः भर्ना आतंक
Posted on April 3, 2013 at 9:30am 10 Comments6Likes
उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा कार्यरत पत्रकार सुनिल न्यौपानेले केहीदिन अघि आफ्नो फेसवुक स्टाटसमा लेख्नुभयो ‘भर्ना फारम २५, परिक्षाको १ सय जम्मा त १२५ नै हो । तर आफ्नो बिद्यालयको प्रचारका लागि छापेका सामग्रीको ३७५ थपेर ५ सय तिर्नै पर्ने । सरकारले तोकेका कानुन मानेका रे निजी बिद्यालयले । निजी बिद्यालयको नाममा खुलेका अभिभावक लुट्ने अड्डाहरु :('…
Posted on March 29, 2013 at 4:30pm 1 Comment 1 Like
At 4:20pm on February 1, 2011, Rupen said…